Shina ny areti-mifindra azo avy amin'ny orinasa fanadiovana fonon-tànana fanadiovana fidiovana Hongmeida
areti-mifindra azo avy amin'ny fidiovana fonon-tanana
Fehin-tànana vita amin'ny landy ho an'ny tanana maina, fonon-tànana vita amin'ny lamba fotsy ho an'ny eczema vehivavy, tanana maina, manompo, fitaterana sarimihetsika, diabe, Archival, vola nangonina.
Endri-javatra & antsipirihany
Sarotra fonon-tànana sarobidy lehibe: Hahazo kiraro 12 vita ho azy vita amin'ny lamba rongony fotsy ianao, ampy ho an'ny tanjonao samihafa: ampiasaina ho fanadiovana fonon-tanana, fanaovana sarin-tanana, fonon-tanana arak'akoho, fonon-tanana matory, fonon-tseva-bolo, saron-tsipika fanaraha-maso sns.
Voasa sy azo averina: Ireo fonon-tanana fotsy malefaka ireo dia vita amin'ny lamba landy, malefaka, maivana ary mahazo aina. Azo sasana izy ireo mba hahafahanao mampiasa tsiroaroa isaky ny misy, manome lanja lehibe
Lehibe lehibe fanampiny: ireto fonon-tànana vita amin'ny XL ity ho an'ny tanana maina dia 9,8 santimetatra ny halavany, somary mivelatra izy ireo mba hifanaraka amin'ny ankamaroan'ny vehivavy sy ny lehilahy, ary afaka mandrakotra ny fehin-tànanao, tsara ho an'ny hamandoana
Miasa ho an'ny tanana maina: Ireo fonon-tànana vita amin'ny XL ireo ho an'ny vehivavy dia malefaka sy miaina fatratra, miasa tsara mba hitazonana ny hamandoana avy amin'ny tanana. Azonao atao ny mitafy azy ireo mandritra ny andro na amin'ny alina aorian'ny fampiharana ny lotion, crème, moisturizer, menaka
Ampiasaina malalaka: ireto fonon-tanana vita fotsy fotsy ireto koa dia azo ampiasaina amin'ny fitarihana sary, sarimihetsika sy rakitsary, fitantanana ny fitaratra sy metaly, fikarakarana zavakanto, fisavana, famoronana, fanodinana trano, familiana, eczema, firavaka, arivana sns.
Vidiny FOB: 0,2 dolara amerikana $ 9,999 / Piece
Fahaiza-mamatsy: 1000000 Piece / Pieces isam-bolana
Color: Fotsy sy mainty
Previous: Fenon-tànana vita amin'ny akanjo vita amin'ny kalitao tsara indrindra
Manaraka: OEM / ODM Factory China White 100% Cotton Industrial Military Parade Eczema Hand Gloves
Fanamboarana fanamboarana orinasa maina any Ha ...
Asa vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba tsy misy lanja Item no….
Fotsy malemy, Ankizy fotsy fonon-tanana, Sarotra Cavy matevina, Cana-Cantél, Fehin-tànana kapoaka fotsy fotsy, Fandraisana telon-tanana,